बलिउडमा सौतनी परिवारको सम्बन्ध – Khabar Silo
एजेन्सी । बलिउडमा केही यस्ता सम्बन्धहरु छन् जसले तपाईलाई आश्चर्यमा पार्न सक्छ । सौतनी आमासँगको सम्बन्धलाई लिएर बेलाबेलमा बलिउडमा चर्चा हुनेगर्छ । कतिपय सेलिब्रिटीको राम्रो सम्बन्ध रहेको छ भने कतिपयले बुबालाई दोष दिर्दै नामबाट थर पनि हटाउने काम गरेका छन् ।
आउनुहोस् हेरौ केही यस्तै सम्बन्धहरु
१. प्रतिक र नादिरा बब्बर
प्रतिकलाई जन्म दिएको केही दिन पश्चात स्मिता पटेलको मृत्यु भएको थियो । स्मिता, राज बब्बरकी दोस्री श्रीमती थिइन् । प्रतिकलाई हुर्काउने काम हजुरबा–हजुरआमाले गरेका थिए । पितासँग सम्बन्ध बिग्रेकै कारण प्रतिकले थर हटाउने काम गरेका थिए । पिता तथा सौतनी आमाप्रति उनको कुनै चासो रहेको छैन ।
अर्जुन कपुर र श्रीदेवी
बलिउड स्टार अर्जुन कपुरकी सौतनी आमा थिइन् श्रीदेवी । पिता बोनी कपुरले श्रीदेवीसँग विवाह गरेपछि पहिलो श्रीमती मोनालाई छोडेका थिए । अर्जुनलाई लाग्छ बोनी कपुर र मोना कपुरको सम्बन्ध श्रीदेवीका कारण बिग्रिएको थियाे । उनले श्रीदेवीलाई आमाको दर्जा हालसम्म पनि नदेको एक अन्तर्वार्तामा बताएका थिए । श्रीदेवी मृत्यु भइसकेकाे छ ।
३. सलमान खान र हेलेन
बलिउड स्टार सलमान खान र हेलेनको सम्बन्ध निकै खास रहेको छ । सलमान खानका पिता सलिम खानले दुईवटा विवाह गरेका थिए । सलमान खान र हेलेन उनीहरुको नाम हो । हेलेन खान परिवारको महत्वुर्ण हिस्सा हुन् । हेलेनको कुरा गर्ने हो भने सलमान र उनका भाइहरुसँग निकै घुलमिल गरेर बसेकी छिन्, हरेक परिवारको समस्या आफ्नै उनले सोच्ने गर्छिन् ।
सारा खान र करिना कपुर
सेफ अली खानकी जेठी श्रीमतीकी छोरी सारा खानसँग करिना कपुरको सम्बन्ध राम्रो रहेको छ । आफ्नै पिताको विवाहमा साराले भाग लिएकी थिइन् । दुई सन्तानका पिता सेफ अली खानसँग जेठी श्रीमतिको सम्बन्ध नराम्रो रहे पनि बच्चाहरुसँग करिनाको सम्बन्ध भने राम्रो रहेको छ ।
सनी–बबी देवल र हेमा मालिनी
बलिउडकी चर्चीत अभिनेत्री हेमा मालिनी सनी र बबी देवलकी सौतनी आमा हुन् । धमेन्द्रको पहिलो विहे प्रकाश कौरसँग भएको थियो । तर, हेमा मालिनीलाई सनी र बबीले आमाको दर्जा नै दिएनन् । हेमा मालिनीबाट जन्मिएका आहाना र इशासँग पनि उनीहरुले कुनै सम्बन्ध राख्न चाहेनन् । बहिनीहरुसँग राखी समेत बाधेनन् ।
फरहान अख्तर र सबाना आज्मी
सिंगर एक्टर डाइरेक्टर फरहान अख्तर र शबाना आज्मीको सम्बन्ध निकै राम्रो रहेको छ । शबानालाई उनले कहिल्यै पनि सौतनी आमाको नजरले हेरेनन् ।
४४ वर्षकी महिला २२औं सन्तानको आमा बन्दै
एजेन्सी-बेलायतको सबैभन्दा ठूलो परिवारकी ४४ वर्षीय महिला सू रैडफोर्ड २२ औं सन्तानको आमा बन्दैछिन्। उनको पेटमा हाल १५ हप्ताको गर्भ रहेको छ। पछिल्लो वर्ष उनले २१ औं सन्तानलाई जन्म दिएकी थिइन्। त्यसबेला उनले यो नै आफ्नो अन्तिम सन्तान हुने बताएकी थिइन्। सू ले हालै पति नोइल रैडफोर्डका साथ आफ्नो अल्ट्रासाउंडको भिडियो यु ट्यूबमा शेयर गरेकी […]
काठमाडौं आफ्नो फिल्म ‘छ माया छपक्कै’ दशैँपछि रिलिज हुने भएपछि दशैँमा दीपकदीपाको फिल्म ‘छक्का पञ्जा २’ युट्युबमार्फत रिलिज गरिने भएको छ । फिल्मका निर्माता तथा कलाकार दीपकराज गिरीले यसबारेमा जानकारी दिए । दशैँको अवसर पारेर हलमा फिल्म ‘रातो टीका निधारमा’ समेत प्रदर्शन हुँदैछ । हलमा फिल्म हेर्न नपाएका दर्शकले लामो समयदेखि यो फिल्मको प्रतीक्षा गरिरहेका […]
कृषिलाई सम्मानित पेशाको रुपमा विकास गर्नुपर्छः मुख्यमन्त्री भट्ट